रिसको सही व्यवस्थापनले के फाइदा ? - Ratopati
रिसको सही व्यवस्थापनले के फाइदा ?
आदर्श प्रधान, मनोपरामर्शदाता, होलिस्टिक माइन्ड्स
रिस के हो ? रिस एक प्रकारको भावनात्मक संवेग हो । सामान्यदेखि शक्तिशाली अवस्थासम्म पुग्न पनि रिसको ऊर्जाले सामथ्र्य राख्छ । रिस सधैँ नकारात्मक मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । रिसकै कारण कतिपय मानिसले आफ्नो सामथ्र्यको पहिचान गर्छ । यसले जुनसुकै प्रतिस्पर्धालाई पनि सामना गर्न सिकाँउछ । रिस या प्रेममा, मानिसको जीवनमा ऊर्जाकै प्रभाव परेको हुन्छ । उर्जा चाहे रिसको होस् या प्रेमको, त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकेमा सफलता प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
रिसको व्यवस्थापन गर्न रिस उठेको वेला मलाई रिस उठेको छ भन्ने थाहा पाउनु जरुरी छ । वास्तवमा मान्छेले चरम रिसको अवस्थामा होससमेत गुमाएको हुुन्छ । जसले गर्दा नराम्रो घटना भएको पनि पत्तो पाउँदैन । होसमा मान्छेले नराम्रो कार्य गर्न सक्दैन । जब रिस उठ्छ, सो समयमा चार–पाँचपटक गहिरो लामो श्वास लिने र छाड्ने बानी गर्नुपर्छ । यस्तो बानीको विकास गर्नाले रिस कम हुन्छ । रिस उठ्नासाथ तुरुन्त मनलाई अन्ततिर लान कोसिस गर्नुपर्छ । साथै, सो परिवेशबाट उम्कने कोसिस गर्नुपर्छ । योग, ध्यान, प्राणायामलाई आफ्नो दैनिकीमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । साथै, मनोपरामर्शदातास“ग परामर्श गर्नु पनि राम्रो हुन्छ ।
टाउको दुख्ने, रक्तचाप, मुटुरोग, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अपचजस्ता शारीरिक समस्या पनि रिसको कारण हुन सक्छ